Download Myanmar Zodiac for Android - Appszoom
by: Arthurmyanmar • 2.2K 8.6
Developer : Arthurmyanmar
ယခု version တြင္ App ၏ အရြယ္အစားကုိ 4.9MB အထိျပန္လည္ေလွ်ာ႕ခ်ထားပါသည္။
အပတ္စဥ္ေဟာတမ္းဖတ္ရာတြင္ အင္တာနက္မေကာင္းေသာအခ်ိန္တြင္ပါဖတ္ရွဳႏိုင္ရန္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။
In this version, we reduced the size of app from 5.7 to 4.9 MB.
And fixed to reduce the loading time in reading weekly horoscopes.
So, you are able to read even in slow internet condition.
Please rate this app and share your friends if you enjoy in using.
» Myanmar Zodiac
Weekly Burmese Horoscope
Monthly Burmese Horoscope
Basic nature of Zodiacs
You can read 90% of articles in this application without accessing to internet.
You will need to access internet only in reading weekly horoscopes.
Myanmar font problem is solved by embedding font in the app.
ဤ Application သည် ဗေဒင်ဝါသနာပါသူ မြန်မာများအတွက်ဖန်တီးထားသော မြန်မာ Applicationဖြစ်ပါသည်။
ထွက်ရှိဖူးသမျှ ဗေဒင် Appများတွင်အစုံလင်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်သော အချက်အလက်များသည် အင်တာနက်ရှိ ထင်ရှားသော ဗေဒင်ဆရာများထံမှစုဆောင်းရရှိပါသည်။
ဤ application ကိုဖတ်ရှူအသုံးပြုကြည့်ခြင်းဖြင့်.
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အကျင့်စရိုက်လေးများကိုလည်းခန့်မှန်းနိုင်ပြီး. . ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်
Tags: view of myanmar , &#4145;&#4119;&#4114;&#4100;&#4153; , myanmar zodiac
NRG 98.5 Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο του Έβρου στο κινητο σου. Με κάλυψη στο σύνολο του Έβρου και προτεραιότητα την “Αληθινή Διασκέδαση” των ακροατών του. Ο NRG 98.5 και η εφαρμογή του σας δίνουν την δυνατότητα να είστε σε άμεση επαφή με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, να τους στέλνετε μηνύματα, να μαθαίνετε όλα τα μουσικά νέα και φυσικά να συμμ…
More by Arthurmyanmar
Download Myanmar Zodiac
Free - 1.23 - 7M